सलाम दारी बिन्जाई एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल] - लुसो गेमर
सलाम दारी बिन्जाई एपीके एन्ड्रोइडका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् [खेल]
नोभेम्बर 25, 2021 by जोन स्मिथ
के तपाईंले कहिल्यै राम्रो अंक कमाउन मद्दत गर्न सक्ने रूखलाई पिट्ने बारे सोच्नुभएको छ? यदि हैन भने यहाँ हामीले सलाम दारी बिन्जाई एपीके नामक नयाँ अविश्वसनीय क्याजुअल गेमिङ एप ल्याएका छौं। गेमप्ले भित्र, खेलाडीहरूलाई BR कमाउन रूखलाई पिट्न निर्देशन दिइन्छ।
यद्यपि वास्तविक रूपमा, वर्तमान विनिमय बजारमा बीआरको कुनै मूल्य छैन। तर गेमप्ले भित्र, यसले एक मान समावेश गर्दछ जसले गेमरहरूलाई विभिन्न शक्तिहरू खरिद गर्न र अपग्रेड गर्न मद्दत गर्दछ। एउटै मुद्रा प्रयोग गरेर पनि, खेलाडीहरूले विभिन्न शक्तिशाली क्यारेक्टरहरू अनलक गर्न सक्छन्।
यस लेख भित्र, हामी को प्रत्यक्ष सम्बन्ध सहित विवरण उल्लेख गछौं थ्रीडी खेल MMA लडाकुहरू र TikTok सँग। साथै हालको भाइरल TikTok भिडियोसँग खेलको सापेक्ष संयोग। त्यसैले तपाईं यस नयाँ गेमप्लेको मजा लिन तयार हुनुहुन्छ भने यहाँबाट सलाम दारी बिन्जाइ गेम डाउनलोड गर्नुहोस्।
सलाम दारी बिन्जाई एपीके के हो
Salam Dari Binjai Apk Leolit ​​Games द्वारा संरचित अनलाइन प्लस अफलाइन गेमिङ एप हो। धेरै सुझाव र अनुरोधहरू प्राप्त गरेपछि गेमप्लेको संरचना बनाइएको थियो। MMA लडाकुहरू लगायत इन्डोनेसियाका मानिसहरूले केराको रूखलाई कुट्न मन पराउँछन्।
इन्डोनेसियालाई केराका रूखहरू उब्जाउने र ठूलो संख्यामा उपलब्ध हुने देशहरूमा गनिन्छ। यो विशेष रूख बाहेक, अन्य प्रजातिका रूखहरूको दुर्लभ संख्या व्यापक रूपमा उब्जाइएको छ। त्यसैले राम्रो लडाई कौशल भएका मानिसहरूले केराको रूख रोज्छन्।
किनकी केराको रूखको काठ कडा हुन्छ र धेरैजसो लडाकुहरूले एउटै रूखलाई मुक्का लगाउन प्रयोग गर्छन्। तैपनि इन्डोनेसियाका मानिसहरूले गुणस्तरको प्रशंसा गर्छन् र MMA मा लडाकुहरूले प्राय: रूखलाई सिक्ने उद्देश्यका लागि सिफारिस गर्छन्। प्रमुख घटनाहरू भित्र पनि, रूख प्रशंसकहरू बीचमा उपस्थित छ।
भर्खरै एउटा नयाँ भिडियो TikTok भिडियो एक मजेदार दृश्य गरेपछि भाइरल भयो। दृश्यमा एक प्रशंसकले केराको रूखलाई MMA लडाकुहरू जस्तै रमाइलो गर्दै हिर्काएको समावेश छ। त्यसैले प्रचलन र प्रशंसकहरूको चासोलाई केन्द्रित गर्दै, विकासकर्ताहरू अन्ततः सलाम दारी बिन्जाइ डाउनलोडको साथ फर्किएका छन्।
नाम सलाम दारी बिन्जाई
आकार 26.99 एमबी
विकासकर्ता लियोलिट खेलहरू
प्याकेज नाम com.LeolitGames.SalamDariBinjai
त्यो एक क्लिक विकल्पको साथ यहाँबाट पहुँच गर्न निःशुल्क छ। गेमिङ एपको स्थापना र एकीकरणको प्रक्रिया सरल छ। पहिले, खेलाडीहरूलाई यहाँबाट एपीके फाइलको नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्न अनुरोध गरिन्छ, जुन एक-क्लिक विकल्पको साथ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
डाउनलोड पूरा भएपछि, अब डाउनलोड गरिएको एपीके फाइल पत्ता लगाउनुहोस् र पुरानो क्लासिक विधिहरू प्रयोग गरेर एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भित्र स्थापना गर्न मजा लिनुहोस्। अब मोबाइल मेनुमा जानुहोस् र कुनै पनि अनुमति बिना गेमिङ अनुप्रयोग सुरु गर्नुहोस्।
गेमप्ले सुरु गर्दा, यसले मुख्य ड्यासबोर्डमा सीधा पहुँच प्रदान गर्दछ। जहाँ एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई अंक कमाउनको लागि नियमित रूपमा रूखमा हिर्काउन निर्देशन दिइन्छ। रूखमा मुक्का लगाउनुले BR कमाउन मद्दत गर्नेछ। पछि कमाएको बीआर सिक्काले क्षति र अन्य शक्तिहरू स्तरवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ।
रूखमा हिर्काउनु बाहेक, गेमरहरूले खेल भित्र केराको बोट पनि उब्जाउन सक्छन्। लक्ष्यहरू पूरा गर्नाले नयाँ कठिन लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, गेमरहरूले स्तरहरू पूरा गर्नमा क्यारेक्टरहरू अनलक र परिवर्तन गर्न सक्छन्।
याद गर्नुहोस् कि विकासकर्ताहरूले यो स्पिन ड्र बोर्ड पनि थपेका छन्। अनलाइन जानुहोस्, तेस्रो पक्षको विज्ञापन हेर्नुहोस् र बोर्ड घुमाउनुहोस्। यदि तपाईं राम्रो अंक कमाउन भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, ती सिधै जम्मा गरिनेछ। त्यसोभए तपाईं बलियो पंचहरू देखाउन तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि सलाम दारी बिन्जाई एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस्।
Apk स्थापना गर्नाले लडाईको लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म प्रस्ताव गर्न सक्छ।
जहाँ खेलाडीहरूलाई मुक्का प्रहार गर्ने पूर्ण अवसर दिइएको थियो।
जति धेरै गेमर रूखमा मुक्का लगाउन सफल हुन्छ।
थप अंक प्रदान गरिनेछ।
ती मोबाइल अनुकूल छन् र विरलै स्क्रिनमा देखा पर्छन्।
खेल इन्टरफेस 2D र सरल छ।
सलाम दारी बिन्जाई एपीके कसरी डाउनलोड गर्ने
हाल गेमिङ एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ। यद्यपि धेरै एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूले अनुकूलता समस्याहरूको कारण नवीनतम Apk फाइल पहुँच गर्न असमर्थ छन्। यद्यपि हामी समस्या बुझ्छौं र गेमरहरूको सहयोगलाई विचार गर्छौं।
हामी यहाँ डाउनलोड सेक्सन भित्र एपीके फाइलको नवीनतम संस्करण प्रदान गर्न सफल छौं। ती Apk को भित्र डाउनलोड सेक्सन प्रस्ताव गर्नु अघि। हामीले यसलाई पहिले नै विभिन्न स्मार्टफोनहरूमा स्थापना गरिसकेका छौं र कुनै समस्या भेटेनौं।
यहाँ हामी एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूको लागि गेमिङ फाइलको नवीनतम र मौलिक संस्करण प्रदान गर्दैछौं। हामीले पहिले उल्लेख गरेझैं हामीले विभिन्न एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूमा गेम फाइल स्थापना गर्यौं र कुनै समस्या छैन। यद्यपि, स्थापना गर्नुहोस् र तपाईंको आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रित गर्दै खेलको मजा लिनुहोस्।
अहिले सम्म हामीले हाम्रो वेबसाइटमा धेरै फरक क्याजुअल र 2D खेलहरू प्रकाशित गरेका छौं। जुन रमाइलो र पहुँचको हिसाबले उत्कृष्ट छ। ती वैकल्पिक खेलहरू अन्वेषण गर्न कृपया प्रदान गरिएको URL मा क्लिक गर्नुहोस्। जो हुन् रिसोर्टोपिया एपीके र GemStone APK खन्नुहोस्.
त्यसैले तपाईलाई 2D क्याजुअल गेमहरू खेल्न मनपर्छ र Salam Dari Binjai Apk डाउनलोड गर्नको लागि अनलाइन स्रोत खोज्नुहोस्। त्यसपछि हामी ती एन्ड्रोइड गेमरहरूलाई हाम्रो वेबसाइट पहुँच गर्न सिफारिस गर्छौं। र कुनै पनि अनुमति बिना यहाँबाट Apk को नवीनतम संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्।
विभाग आकस्मिक, खेल ट्याग थ्रीडी खेल, सलाम दारी बिन्जाइ एन्ड्रोइड, सलाम दारी बिन्जाई एपीके, सलाम दारी Binjai डाउनलोड, सलाम दारी बिन्जाई खेल मेल अन्वेषण
एन्ड्रोइडका लागि रिसोर्टोपिया एपीके डाउनलोड [आकस्मिक खेल]
एन्ड्रोइडका लागि परफेक्ट टेल एपीके डाउनलोड [खेल]